Ukujonga ngokulula, ukubeka iliso, kunye nokulungisa amakhonkco aphukileyo kwiWordPress | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 9, 2021 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 24, 2021 Douglas Karr
Martech Zone uye watyhutyha amatyeli aliqela okoko kwasungulwa ngo-2005. Sitshintshe idomeyini yethu, safudukela kwisiza sayoku imikhosi emitsha, Kwaye saphinda sabekwa uphawu kaninzi.
Ngoku kukho amanqaku angaphezu kwama-5,000 10,000 apha kunye namagqabantshintshi angama-XNUMX kule ndawo. Ukugcina indawo isempilweni kubakhenkethi bethu nakwiinjini zokukhangela ngelo xesha ibingumceli mngeni omkhulu. Omnye wale mingeni kukubeka iliso kunye nokulungisa amakhonkco aqhekekileyo.
Amakhonkco aneziphene Zoyikeka- hayi nje kumava abatyeleli kunye nonxunguphalo lokungayiboni imithombo yeendaba, ukukwazi ukudlala ividiyo, okanye ukusiwa kwiphepha le-404 okanye kwi-domain efileyo… kodwa zikwabonisa kakubi kwindawo yakho iyonke kwaye zinokwenzakalisa ukukhangela kwakho. igunya lenjini.
Indlela eliQokelela ngayo iSiza sakho esiDibeneyo
Ukufumana amakhonkco aphukileyo kuyinto eqhelekileyo kwiindawo. Kukho itoni yeendlela ezinokuthi zenzeke- kwaye zonke kufuneka zibekwe esweni kwaye zilungiswe:
Ukufudukela kwisizinda esitsha -Ukuba ufudukela kwisizinda esitsha kwaye ungazicwangcisi ngokufanelekileyo izikhombisi zakho kwakhona, amakhonkco amadala kumaphepha akho kunye nezithuba ziya kusilela.
Ukuhlaziya ulwakhiwo lwakho lwepermalink -Xa ndandipapasha indawo yam yokuqala, sasidla ngokubandakanya unyaka, inyanga, kunye nomhla kwii-URL zethu. Ndiyisusile loo nto kuba ibhalwe umxholo kwaye inokuba neziphumo ezibi ekumeni kwalawo maphepha kuba iinjini zokukhangela zihlala zicinga ngezakhiwo zolawulo njengokubaluleka kwenqaku.
Iziza zangaphandle ziyaphelelwa okanye aziyi kuqondisa kwakhona -Kuba ndibhala ngezixhobo zangaphandle kunye nophando ngetoni, kukho umngcipheko wokuba loo mashishini aya kungena phantsi, afunyanwe, okanye atshintshe ubume besiza ngaphandle kokuqondisa ngokufanelekileyo amakhonkco abo.
Imidiya isusiwe - amakhonkco kwimithombo yemithombo yeendaba engasenakho ukuvelisa izikhewu kumaphepha okanye iividiyo ezifileyo endizibandakanyileyo kumaphepha kunye nezithuba.
Nika iikhonkco -Izimvo ezivela kwiiblogi zobuqu kunye neenkonzo ezingasekhoyo zixhaphakile.
Ngelixa izixhobo zokukhangela zihlala zinomkhangeli obonisa le micimbi kwindawo, ayenzi kube lula ukubona ikhonkco okanye imithombo yeendaba ephosakeleyo ungene ungene uyilungise. Ezinye izixhobo zenza umsebenzi owoyikekayo wokulandela ngqo ulungelelwaniso olusebenzayo ngokunjalo.
Ngombulelo, abantu kwi IWPMU kwaye Lawula iWP -Iinkampani ezimbini zenkxaso zeWordPress ezintle- ziphuhlise iplagi enkulu yasimahla yeWordPress esebenza ngaphandle komthungo ukukukwazisa kwaye ikunike isixhobo solawulo sokuhlaziya amakhonkco akho kunye nemithombo yeendaba.
IsiKhangeli esiHlanganisiweyo seWordPress
The Iplagi yokujonga ikhonkco eyaphukileyo iphuhliswe kakuhle kwaye kulula ukuyisebenzisa, ukujonga ikhonkco lakho langaphakathi, langaphandle, kunye nemithombo yeendaba ngaphandle kokusebenzisa kakhulu izixhobo (okubaluleke kakhulu). Kukho itoni yokukhetha useto olunokukunceda nawe-ukusuka ekujongeni ukuba kufuneka bajonge kangaphi, ukuba bajonge kangaphi ikhonkco ngalinye, zeziphi iintlobo zemithombo yeendaba zokujonga, nokuba ngubani omele aziswe.
Unokudibanisa ne-API ye-YouTube ukuqinisekisa uluhlu lwadlalwayo kunye nevidiyo. Eli luphawu olwahlukileyo oluphoswa ngabaninzi abakhasayo.
Iziphumo zilula ukusebenzisa ideshibhodi yazo zonke iilinki zakho, amakhonkco aphukileyo, amakhonkco kunye nezilumkiso, kunye nokuqondisa kwakhona. Ideshibhodi ikunika ulwazi nokuba liphepha, iposti, amagqabantshintshi, okanye olunye uhlobo lomxholo unxibelelwano olungisiweyo. Eyona nto ingcono, unokulungisa ikhonkco kwangoko nangoko!
Le iplagi ebalaseleyo kwaye kufuneka ubenayo yonke indawo yeWordPress efuna ukubonelela ngamava omsebenzisi aphezulu kunye nokwenza indawo yabo ibe yeyona yeziphumo zophando. Ngeso sizathu, siyongeze kuluhlu lwethu Iiplagi ezilungileyo ze-WordPress!
IsiKhangeli esiHlanganisiweyo seWordPress Eyona plugins yeWordPress yeShishini
tags: eyona Wordpress pluginsizilumkiso zonxibelelwano ezaphukileyoikhonkco yekhonkco ephukileyojonga amakhonkco aqhekekileyoiziphene ezinesipheneamakhonkcolawula amakhonkco aqhekekileyojonga amakhonkco aphukileyoUmhloli wevidiyoWordPressIgama lokujonga ikhonkco elaphukileyoiplagi yamagamawpmanagewpmuUmhloli we-YouTubeividiyo ye youtube